Russia inogumisa zvirango kuAustria, Switzerland, Finland neUAE nendege
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Russia Kuputsa Nhau » Russia inogumisa zvirango kuAustria, Switzerland, Finland neUAE nendege
Airlines • nhandare yendege • Austria Kuputsa Nhau • avhiyesheni • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Finland Kuputsa Nhau • Russia Kuputsa Nhau • Switzerland Kuputsa Nhau • Thailand Kuputsa Nhau • UAE Kuputsa Nhau
Russia inogumisa zvirango kuAustria, Switzerland, Finland neUAE nendege.
Russia ichatangazve basa remhepo nedzimwe nyika pfumbamwe, dzinosanganisira Bahamas, Iran, Netherlands, Norway, Oman, Slovenia, Tunisia, Thailand neSweden, kutanga muna Mbudzi 9.
Zviremera zveRussia zvakafunga kubvisa zvirambidzo pamhepo traffic neAustria, Switzerland, Finland neUnited Arab Emirates kubva munaNovember 9, 2021.
Kusvika parizvino Russia yatangazve basa remhepo nenyika makumi matanhatu nenomwe.
Basa rezvemhepo neTanzania rakamiswa kusvika munaNovember 1 nekuda kwemamiriro ekurwara munyika.
Mumiriri weRussia federal coronavirus yekudzivirira mahofisi makuru azivisa nhasi kuti Russian Federation ichagumisa zvinorambidzwa nendege neAustria, Switzerland, Finland neUnited Arab Emirates kutanga kubva munaNovember 9, 2021.
Sheremetyevo International Airport yaAlexander Ponomarenko Anokurukura Master Development Chirongwa neBhodi
"Kutevera mhedzisiro yenhaurirano uye tichifunga mamiriro ehutachiona mune dzimwe nyika, zvakagadziriswa kubvisa zvirambidzo pakufamba nendege neAustria, Switzerland, Finland neUnited Arab Emirates kubva munaNovember 9, 2021," akadaro mukuru uyu.
Russia yakatangazve kufamba kwemhepo neFinland mukupera kwaNdira, 2021, neSwitzerland - mukupera kwaNyamavhuvhu wa2020, neUAE - kutanga kwaGunyana 2021, neAustria - pakati paJune wa2021.
Kunyanya, ndege dzinozoitirwa kuBahamas pakati peMoscow neNassau (kaviri pasvondo), kuenda kuIran pakati peMoscow neTehran (ndege nhatu pavhiki), uye pakati peSochi neTehran (kamwe pasvondo). Zvakare, ndege dzinoenda kuNetherlands pakati peMoscow neAmsterdam (kanomwe pavhiki), pakati peMoscow neEindhoven (kaviri pasvondo), pakati peSt. Petersburg neAmsterdam, Zhukovsky uye Amsterdam, Yekaterinburg neAmsterdam, Kaliningrad neAmsterdam, Sochi neAmsterdam (ndege mbiri pavhiki munzira imwe neimwe), dzichatangwazve.
KuNorway neSweden nendege dzichaitwa kaviri pasvondo kubva kuSt. Petersburg kuenda kuBergen neOslo, pamwe nekuStockholm neGoteborg. Ndege dzichaendeswazve kuOman pakati peMoscow neMasqat (kaviri pasvondo), kuSlovenia pakati peMoscow neLjubljana (katatu pasvondo), nendege dzeTunisia dzeMonastir dzichaitwa kubva kuMoscow (nendege nomwe pavhiki) uye kubva kuSt. (ndege mbiri pasvondo), pamwe nendege dzinogona zvakare kubva kune dzimwe nhandare dzeRussia, kubva kwadziri kutangiswazve nendege dzenyika (ndege mbiri pasvondo munzira imwe neimwe).
Mhepo service ne Tairendi ichatangwazve ichitarisa zvinodiwa nenyika, zvichireva chete kuvagari veRussia vakabaiwa hutachiona hwehutachiona hwekoronavirus. Ndege dzichaitwa kubva kuMoscow kuenda kuBangkok nePhuket (kaviri pasvondo), pamwe nekubva kunhandare dzendege dzeRussia, kubva kwadzokerwa nendege dzenyika dzakawanda (imwe ndege pavhiki munzira imwe neimwe).
Kusvika parizvino Russia yatangazve basa remhepo nenyika makumi matanhatu nenomwe. Basa rezvemhepo neTanzania rakamiswa kusvika munaNovember 62 nekuda kwemamiriro ekurwara munyika.